iska hor imaad khasaare gaystay oo saaka aroornimadkii ka dhacay magalada balad weyne ee gobolka hiiraan iyo xalada gobolkaa oo dagen - khaliilberberawi's blog
iska hor imaad khasaare gaystay oo saaka aroornimadkii ka dhacay magalada balad weyne ee gobolka hiiraan iyo xalada gobolkaa oo dagen
Iska horimaadyo qasaare geystay ayaa saakay lagu soo waramayaa in ay ka qarxeen Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan iyadoo xaaladda Magaaladaasina hadda ay tahay mid degan.
Iska horimaadyo xoogan ayaa saakay subuxii hore waxaa la sheegay in ay ka dhaceen Magalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan halkaasi oo maalmihii la soo dhaafay qalalaaso daris la noqotay.
Rasaas ay bar bar socdeen Madaafiic ayaa saakay waxaa laga maqlay buundooyinka ay isku horfadhiyaan labada dhinac ee ciidamada Culumaa'udiinka Ahlu Sunna iyo kuwa Ururka Xisbul Islaam iyo xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab oo is garabsanaya.
Israsaaseyntaasi kadib ayaa waxaa la sheegay in xaaladu ay noqotray mid Xasiloon iyadoo israsaaseyntii saakay ay dhaawacyo ka soo gaareen dad rayid ah oo ka mid ah dadka ku haray Xaafadaha Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan.
Axmed Cumar Cadoow oo ka mid ah dadka fara ku tiriska ah eek u haray Xaafadaha Magaalada Baladweyne oo saxafada la hadlayay ayaa waxaa uu sheegay in xaaladda haatan ay tahay mid degan hase ahaatee saakay ilaa dhowr daqiiqo magaalada ay ka dhacday israsasaeyn u dhaxeysa Labada dhinac ee Magaalada Isku heysata.
Dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Baladweyne ayaa mid walba waxaa uu doonaya in uu isagu ku guuleysto gacan ku heynta Magaalada iyadoo magaaladuna ay gashay maalintii 7-aad oo rasaas la isku weydaarsanayo,iyadoo horayna magaalada ay isaga carareen dadkii deganaa.
Mohamed Abdirahim Hassan (fowz) Muqdisho-Somalia
# Posted on Saturday, 16 January 2010 at 12:33 PM